उच्च अदालतबाट थुनामुक्त होलान् कृष्णबहादुर महरा ? | Ratopati
उच्च अदालतबाट थुनामुक्त होलान् कृष्णबहादुर महरा ?
काठमाडौ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ । जर्वजस्ती बलात्कार प्रयास आरोपमा आफूलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णयविरूद्ध महराले पुनरावेदन गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले महराको पुनरावेदन निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्न लागेका हुन् ।
महराले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर माग गरेका थिए ।
यसअघि उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश मगाउने निर्णय गरेको थियो ।
बिहीबारको सुनुवाइमा उच्चले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय सदर गर्ने अथवा बदर गर्नेमध्ये एक निर्णय गर्ने छ । उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याए महरा थुनामुक्त हुने छन् भने सदर गरे थुनामै रहनुपर्नेछ ।